Edere site Tranquillus | Jan 6, 2018 | Ngwakọta ịntanetị
Zụgharịa ngwa ngwa na ọrụ dijitalụ site na iji nkuzi ntụrụndụ ndị a na-enye na teepu Tuto.com.
Ever nụtụla banyere ya Tuto.com ? Platformlọ ọrụ ọzụzụ a dabere na usoro “mmụta mmekọrịta ọha na eze”. Ọ na - enyere gị aka ịzụ ngwa ngwa na ọrụ dijitalụ. Youmara etu e si enweta ụgwọ ọrụ na kọmputa na CV n’ụbọchị ndị a, ị ga - eche na ịnwe nkuzi ole na ole na www.Tuto.com nwere ike inye gị ohere inye aka n'ọrụ ọkachamara gị.
Kedu ihe mmụta mmụta mmadụ na-eme?
Na Tuto.com, ọtụtụ n’ime ha na-azụ ọzụzụ iji mụta banyere kọmputa. Karịkwara na sọftụwia teknụzụ dịka Adobe Photoshop, Onye na-ese ihe na InDesign. Ihe dị iche na ikpo okwu a na MOOC site na ndị na-asọmpi ya bụ eziokwu bụ na ọ bụ "mmụta mmụta mmekọrịta ọha na eze". Yabụ kedu ihe mmụta mmụta mmekọrịta ọhaneze pụtara?
N’ezie, n’ime ihe ọmụmụ nke ọ bụla, ebe ezumike a na-enyere ibe anyị aka dị ka ndị ga-amụ ihe iji na-ekwurịtakarị okwu. Ya na ndi ozo sonyere ma obu onye na-enye ọzụzụ n'onwe ya. N'ihi ya, ọ dịghị ajụjụ a na-azaghị ruo ogologo oge. A ezigbo gbakwunyere maka ụmụ akwụkwọ ndị na-atụ egwu nkewapụ iche metụtara ọzụzụ online.
Mgbanwe ahụ dị n'isi ụlọ ọrụ Tuto.com. O nwedịrị ike ịrịọ maka ndụmọdụ vidiyo vidiyo maka ndị anaghị enweta ego site na ịhọrọ 'Usoro nkuzi'. Uzo echiche a n’enwe ndi nile nke ikpo okwu aka hazie ihe omuma ya bu ihe ndi mmadu nwere ike imeghari.
Obere akụkọ banyere Tuto.com
Na 2009, a mụrụ mama Tuto.com. Echiche bụ isi bụ ịnye ọzụzụ ọzụzụ kọmputa dị mma. Ndị a ga-akụziri ndị nkụzi site na ndị nkụzi nwere ahụmahụ na karịa mmasị niile banyere ọrụ dijitalụ. N'ụzọ dị otú a, ikpo okwu na-ejikọta ụmụ akwụkwọ ndị chọrọ ịmụta software kachasị amara na ọrụ dijitalụ na ndị nkụzi zuru oke na-ahụzi nkà kachasị achọ.
GỤỌ Okwu weelearn: Look-Learn
Site na nkuzi e-mmụta site na vidio ndị dị ụtọ ma dị mfe nghọta, ihe ọmụmụ niile zuru ezu ma bụrụ ndị e bu n'uche maka ndị na-amalite na sayensị kọmputa. N'etiti ndị ahịa nke ikpo okwu, e nwere n'ezie ndị mmadụ n'otu n'otu, kamakwa ụlọ ọrụ ndị chọrọ ịzụ ìgwè ha n'ụzọ dị irè na ngwa ngwa. Ntinye Tuto.com nwere ike ịbụ ezigbo ngwọta iji mezuo ihe ọmụma gị na dijitalụ.
Nkụzi ndị a na-enye site na Tuto.com
Naanị na Tuto.com enwere ọmụmụ ihe ndị metụtara isiokwu nke sayensị kọmputa. Ihe ndekọ a site n'iji ngwanrọ nke ụlọ ọrụ mee ihe maka mmemme ka ukwuu, akpaaka ụlọ, ntinye foto ma ọ bụ webdesign dịka ọmụmaatụ. Usoro ọ bụla na-ewebata onye mmụta ahụ na ngwanrọ dị mgbagwoju anya, mana ọ dị mkpa na ọrụ ụwa taa.
N'ezie, a na-ekpuchi isi ihe niile. Photoshop Nkuzi juputara ezigbo akụkụ nke katalọgụ nke fr.Tuto.com. Na ezi ihe kpatara ya: ọ bụ otu n'ime ngwanrọ kachasị baa uru na okike dijitalụ. Ndị na-amụ ihe osise eserese nwere ike ịmụ etu esi ejikwa software edezi site na A ruo Z wee chọpụta atụmatụ ọhụrụ nke Photoshop CC. Maka ndị na-achọ ọzụzụ na mmezi vidiyo na Adobe Premiere Pro, usoro ọmụmụ teknụzụ ga-ewere gị site na ntinye site na ngwaọrụ ndị dị mkpa mejupụtara mmemme ndị a ama ama.
Nhazi ọzụzụ dịka mkpa gị
Ịmezu ma ọ bụ ịnye ọganihu ọhụrụ na nlọghachi gị bụ ngwa ngwa na mmekọrịta maka ikpo okwu. Nke a bụ ma eleghị anya ihe na-akọwa ya ewu ewu. Otú ọ dị, e nwere ụdị ọnụahịa dị iche iche, ma ndị a dabere na ihe mgbaru ọsọ ịchọrọ iji nweta ọzụzụ gị. Ebe ọ bụ na isiokwu dị iche iche na-ekpuchi ya, ọ ga-adịrị gị mfe ịzụ onwe gị ọzụzụ zuru oke ma gbanwee kpam kpam maka mkpa gị.
GỤỌ Maxicours: Ntughari nke nkuzi online ọnụ ala
Atụmatụ dị mkpa maka usoro software dị elu, ị ga-ahụ ọkwa nkuzi ọkachamara iji mebie ụwa dijitalụ. Na mgbakwunye na ịmụ otú e si eji Photoshop, nnukwu kọntaktị Tuto.com na-enye akụnụba dị ịtụnanya. Site na ihe e kere eke weebụ gaa na eserese dijitalụ, akụkụ niile nke weebụ nwere ma ọ dịkarịa ala otu ụzọ a raara nye. Ya mere ọ bụ ihe dị mma maka ị ga-enwe ọganihu n'akụkụ niile. Ọbụna o kwere omume ịgbaso ọzụzụ na SEO ma ọ bụ ịmụta foto site na nkuzi vidiyo dị mfe. Okpukpo okwu bu ihe omuma nke ndi nkuzi.
Kedu ọnụahịa nke ikpo okwu?
Dabere na ihe mgbaru ọsọ gị na ọkwa (dị elu ma ọ bụ na ọ bụghị) ịchọrọ iru, ọkwa ọkwa ndenye dị iche iche. Enwere ike ilele ihe mmụta vidio 1500 otu n'efu. Onyinye a dị ntakịrị na-enye gị ohere ịnwale Tuto.com tupu ị họrọ usoro dị oke ọnụ. Yabụ, usoro nke ọ bụla nwere ọnụahịa ya pụrụ iche. Nke a dị iche na € 10 na € 50 na nkezi. Ihe omumu a bu nke oma, nke oma nke oma ma lekwasiri anya n'otu isiokwu di omimi.
Ụkpụrụ nke Tuto.com dị mma maka ndị chọrọ ịmalite na-enweghị isi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara otu esi eji njirimara niile nke ngwanrọ ị kwadoro dị ka autodidact, ọ na-agwa gị okwu ozugbo. N'aka nke ọzọ, ọ dị iche ma ọ bụrụ na ihe kacha mkpa bụ ịnweta ọzụzụ zuru oke dịka o kwere mee. N'okwu a, ọ ga-adị gị mkpa itinye ego buru ibu iji nwee ike ịmasị ndị ọrụ.
GỤỌ Ngosipụta nke ikpo okwu ịntanetị iBellule
The "Pro Courses" bụ ndị na - enyeghị ọzụzụ diplọma, mana ike gwụrụ, na ọrụ enyere ha. Ha zuru oke iji mee ka ịmalitegharịa na ịkwalite ihe ọmụma gị n'otu mpaghara. Ọ bụ nnukwu ọzụzụ ọzụzụ dịtụ nke ezubere ịgbanwe gị ịbụ ọkachamara. Knowmata: ọ ga-ekwe omume iji ohere itinye ego na CPF (Akaụntụ Ọzụzụ nkeonwe) iji kwado usoro gị na Tuto.com. Egbula oge ịjụ ndị ọrụ gị.
Tuto.com: N'uzi Na Nzuzi Na-eme Ka Ịmụta N'uzi Na Nzuzi. Mee 10th, 2020Tranquillus
gara agaEscaping Negativity-Chebe onwe Gị Ebumnuche Na-adịghị mma
-esonụỊtụnanya na-atụ egwu-Egwu dị ka ihe mgbaàmà